रूस वसोवास लागि मेक्सिकोमा भिषा
एक भिसा प्राप्त गर्न कसरी प्रश्न रुचि - अमेरिका, को Crossroads मा स्थित एक देश - एउटा कारण वा मेक्सिको अर्को भ्रमणको लागि जाँदै छन् जो सबै मानिसहरू। मेक्सिकोमा पर्यटन, व्यापार यात्रा को लागि, तपाईं एकल ट्रान्जिट प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कागजात बिना, तर केवल तीस दिनको लागि मात्र त्यहाँ एउटा विद्युतीय प्राधिकरण छ भने। खैर, यो नि: शुल्क जारी छ। एक कि मेक्सिको भिसा आवश्यक एक महिना भन्दा बढी समय देश मा रहन योजना गर्नेहरूका लागि? निस्सन्देह, हो। अनुमति वा consular भिसा प्राप्त गर्न कसरी, र यो कागजातहरू के आवश्यक हुनेछ, र हामी लेखमा कुरा छौँ जानकारी को लागि।
मुद्दा र इलेक्ट्रोनिक परमिट को प्रयोग सर्तहरू
कागजात को यात्रा को अन्त पछि कम्तिमा अर्को छ महिना लागि मान्य हुनुपर्छ जो पासपोर्ट, को उपस्थिति मा रूसी नागरिक गर्न जारी छ। तपाईं मेक्सिको गर्न उडान बिल्कुल कुनै पनि विमान फाइदा लिन, तर आफ्नो चुनिएको विमान योजना SR संलग्न छ पूर्व-प्रमाणित गर्न पक्का हुन सक्छौं। यो एक इलेक्ट्रोनिक प्राधिकरण मात्र हावा द्वारा देश मा प्रवेश को मामला मा लागू उल्लेख गर्नुपर्छ।
, निर्णय गर्ने मान्छे भूमि वा समुद्र यात्रा गर्न म मेक्सिको एउटा भिसा चाहिन्छ? को पाठ्यक्रम। यो दूतावास प्राप्त हुनुपर्छ। यसलाई अस्वीकार गरियो केही कारण लागि अनुमति जारी गर्न जब सम्बोधन गर्न पनि हुनेछ मेक्सिकन दूतावास। यस मामला मा, तपाईं मेक्सिको एउटा भिसा आवश्यक छ। कागजात प्राप्त मा ढिलाइ नियम, प्रक्रिया सात कुनै अधिक काम दिन लाग्छ, त्यहाँ पाउन सकिन्छ।
एक इलेक्ट्रोनिक प्राधिकरण प्राप्त
मास्को मा मेक्सिको को दूतावास को वेबसाइट मा अनलाइन मोड मा प्रश्नावली भर्न आवश्यक छ। यो नस्ल, राष्ट्रियता, जन्म, धर्म, नम्बर को मिति र मिति सहित आफ्नो व्यक्तिगत डाटा निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ पासपोर्ट को मुद्दा को। साथै प्रविष्टि को मिति र देश मा रहन योजना अवधि, को यात्रा को उद्देश्य रूपमा। नियम, सकारात्मक प्रतिक्रिया पाँच मिनेट मा आएको छ।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि प्राप्त विद्युतीय प्राधिकरण यो मेक्सिको गर्न आगमन मा समस्याहरू fraught किनभने, कुनै पनि त्रुटिहरू, inaccuracies समावेश गर्नुपर्छ - तपाईं पनि देशबाट deported हुन सक्छ। अब यस्तो Ivanov, Petrov र यति मा, रूप धेरै साधारण नाम, मानिसहरूलाई एउटा इलेक्ट्रोनिक प्राधिकरण प्राप्त गर्न इन्कार जहाँ एक अभ्यास छ। तपाईं एक झटका भोगे छ भने, के छैन - पत्ता लगाउन जो मेक्सिको एउटा भिसा आवश्यक हुनेछ, र दूतावास द्वारा निर्धारित तरिका मा ठाँउ हो।
यदि कुनै समस्या भए र एक इलेक्ट्रोनिक प्राधिकरण प्राप्त भएको छ, तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ (कृपया!) दिशा मा मेक्सिको एउटा उडान बनाउने। तर यो देश प्रवेश गर्न अनुमति गरिने ग्यारेन्टी छैन। घरहरू संकल्प छाप्न भूल छैन - तपाईं प्रस्थान दिन अगाडि डेस्क मा यो प्रदान गर्न आवश्यक हुनेछ। पहिले नै सीमा नियन्त्रण अधिकारी मा मेक्सिकोमा आगमन मा ई-मेल माइग्रेसन सेवा सम्झौता र आफ्नो वर्तमान राहदानी जाँच गर्नेछ। सबै डाटा सही छ भने, तपाईँले प्रविष्ट गर्न अनुमति दिइनेछ।
अठार को उमेर मुनिका बच्चाहरु लागि
मूल: मेक्सिको इलाका र बाहिर निस्कन प्रविष्ट सानो बच्चाहरु (आमाबाबुले बिना वा एक अभिभावक संग) यात्रा गर्न थप कागजात आवश्यक बाट बच्चा छोड्ने सम्झौता स्पेनिश मा र जन्म प्रमाणपत्र, यी कागजात को notarized अनुवाद। प्रवेश मा माथि-उल्लेख कागज पेश गर्न विफलता को मामला मा / निस्कनुहोस् अस्वीकार गरिनेछ।
नियन्त्रण (मेक्सिको मा आगमन मा) पारित अघि भर्न छ एक माइग्रेसन कार्ड र भन्सार घोषणा (घोषणामा भरिएको परिवारको लागि)। नियन्त्रण बिन्दु तपाईं लगिनेछ नक्सा, र तपाईं यात्रा को अन्त सम्म, उनको बचत गर्न आवश्यक हुनेछ अन्य को एक भाग - यो देश छोडेर आवश्यक थियो। को प्रवास कार्डको हानि राम्रो संग fraught छ। कार्ड सामान्यतया सीमा नियन्त्रण पारित प्रक्रिया बढाउने विमान मा भरिएका छन्। उडान परिचारक आफ्नो यात्रु दिन, साथै भर्नु मा सहायता प्रदान गर्नुहोस्। तर यो सधैं त, उडान समयमा तपाईं एक माइग्रेसन कार्ड भर्न छैन भने विमानस्थलमा मा डेस्क मा लिन सुनिश्चित छ। यस कागजातमा लेखेर कालो वा नीलो मसी मा ल्याटिन अक्षरहरू छापिएको हुनुपर्छ। तपाईं हो, प्रत्येक प्रविष्ट गर्न को लागि एक कार्ड भर्न पर्छ, र पनि बच्चा।
मेक्सिको गर्न भिसा आवश्यक छैन?
रूसी नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका मान्य भिसा वा सेन्जेन राज्य को एक स्थायी निवासी, साथै जापान, अमेरिका, क्यानाडा को सबै विभाग मा छ, मेक्सिको गर्न भिसा आवश्यक छैन। विद्युतीय अनुमति मान्छे को यी विभाग पनि प्राप्त गर्न आवश्यक छैन।
यस्तो अनुमति जारी छ र माथि दस वर्ष छ महिना (एक सय र असी दिन) को एक अवधिका लागि मास्को मा मेक्सिकन दूतावास को consular विभाग को एक धेरै। , तपाईंलाई आवश्यक मेक्सिको कुन भिसा कि यात्रा को उद्देश्य मा निर्भर गर्दछ। काम, यात्रा वा व्यवसाय मा - - वा व्यापार अतिथि तपाईं एक पर्यटक रूपमा देश भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले एक पर्यटक भिसा, काम गर्न यात्रा गर्न आवश्यक छ। दस्तावेज प्रत्येक को लागत फरक, हामी पछि कुरा गर्नेछन् जो छ।
त्यसैले, पहिले तपाईँले मेक्सिको को दूतावास को वेबसाइट मा दर्ता गर्न, आवश्यक दर्ता परमिट लागि अनुरोध किनभने फारम - ई। मेक्सिको गर्न भिषा पाँच दस गर्न काम दिन भित्र बनेको छ। दर्ता गरेसँगै निर्दिष्ट ई-मेल ठेगाना गर्न प्रश्नावली पहुँच प्रदान गर्दछ पासवर्ड इमेल गरिने छ। फोन नम्बर, ठेगाना र रहन हुनेछ जहाँ होटल (वा अन्य स्थानमा) को नाम सहित सबै आवश्यक जानकारी, केवल दस मिनेट यसको भर्नको लागि विनियोजन भनेर याद, त्यसैले अग्रिम तयार। मेक्सिको एउटा भिसा लागि आवेदन ल्याटिन अक्षरहरू (यो एक जरूरी छ) भरिएको छ। सबै डाटा प्रविष्ट भएपछि, बटन "पठाउनुहोस्" प्रेस, र त्यसपछि आवेदन फारम प्रिन्ट गर्नुहोस्।
ई-मेल गरेर अनुरोध पठाउन पछि तपाईं आफ्नो पासपोर्ट मा stamped एक भिसा लागि वाणिज्य दुतको कार्यालय सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जो मा मिति एक पत्र पठाइने छ। सन्दर्भ मिति मेक्सिको समय (मास्को संग फरक - आठ घण्टा) मा यसो भनेर याद, त्यसैले अर्को दिन थप्न। साथै, यो प्रश्नावली को पूरा गरेपछि वाणिज्य दुतको कार्यालय कल गर्न र यो प्रणालीमा ठीक छ कि छैन भनेर स्पष्ट गर्न सिफारिस गरिएको छ।
अर्को तपाईं सीधा वाणिज्य दुतको कार्यालय जाने र आवश्यक कागजात र औंलाहरु पेश गर्न, साथै भिसा शुल्क तिर्नुपर्छ। यो छ महिना र दस वर्षसम्म मेक्सिको गर्न भिसा, विभिन्न तरिकामा जारी उल्लेख गर्नुपर्छ।
छ महिना लागि भिसा प्राप्त लागि कागजातहरू
1 मूल मान्य पासपोर्ट र यसको पहिलो पृष्ठ को प्रतिलिपि।
2. दुई 3x4 फोटो निम्न आवश्यकताहरू पूरा गर्ने:
तिनीहरूले भन्दा छ महिना पूर्व अनुरोध को दाखिला गर्न कुनै पहिले गरिनु पर्छ;
छवि सेतो पृष्ठभूमिमा रंग गर्न तस्वीरको बारेमा सत्तरी प्रतिशत लिनुपर्छ;
फोटो कागज - मत्ती;
फ्रेम, ovals, फोटो को स्थलहरू हुँदैन;
घाम, टोपी यसलाई धार्मिक कारणले आवश्यक छ जब परिस्थिति बाहेक निषेधित फोटो खिंचवाने।
3. छन् नगर्ने रूसी संघ को नागरिक, तर रूस एउटा भिसा लागि लागू गर्न मान्छे, यो एक देश मा कानुनी रहन पुष्टि गर्छ जो कागजात, को मूल र प्रतिलिपि पेश गर्न आवश्यक छ।
4 दस्तावेज आफ्नो सल्वेंसी पुष्टि:
बैंक विवरण अन्तिम छ महिनामा (मूल र प्रतिलिपि) (काम गर्न कुनै सन्दर्भ यो रकम $ 2,400, पाँच सय दिनको लागि मेक्सिको सिटी न्यूनतम ज्याला बराबर छ देखि लिएर कि मनमोहक छ);
आय विवरण अन्तिम छ महिनामा (मूल र प्रतिलिपि) (प्राथमिकताको मासिक तलब एक सय र पचास दिनको लागि मेक्सिको सिटी न्यूनतम ज्याला बराबर छ जो 715 डलर देखि लिएर);
विद्यार्थीहरूको लागि - छात्रवृत्ति, भत्ता वा तलब, अध्ययन (मूल) को स्थान बाट प्रमाणपत्र को प्रमाणपत्र, जो यात्रा प्रायोजित छ, रोजगारी को एक व्यक्ति, र आफ्नो कथन एउटा सन्दर्भ;
विद्यार्थीहरूको लागि -, काम को व्यक्ति ठाउँ जो यात्रा प्रायोजित छ, र आफ्नो बयान, स्कूल देखि प्रमाणपत्र देखि प्रमाणपत्र;
पेंशनरहरुलाई लागि - पेन्सन प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि), काम को स्थान व्यक्ति प्रमाणपत्र, को यात्रा प्रायोजित भएको छ, र आफ्नो बयान;
दर्ता immovable र उपस्थिति दस्तावेज चल्ने सम्पत्ति (कुनै छ भने);
कागजातहरू व्यापार मा व्यापार वा साझेदारी को स्वामित्व (कुनै छ भने) पुष्टि।
दस वर्ष को लागि एक भिसा प्राप्त लागि कागजातहरू
कागजातको सूची नै छ, तर यो पछिल्लो छ महिनाको लागि तलब को प्रमाणपत्र मा, मासिक रकम $ 1,400, तीन सय दिनको लागि मेक्सिको सिटी न्यूनतम ज्याला बराबर छ देखि लिएर कि मनमोहक छ। यो पनि मुद्रण माइग्रेसन सेवा समावेश पासपोर्ट पृष्ठहरू र मान्य भिसा को प्रतिहरू बनाउन आवश्यक छ। हामी खेलाडीहरूलाई बारेमा कुरा गर्दै भने, वैज्ञानिकहरू, कलाकार, पत्रकार, तिनीहरूले कागज पुष्टि उपलब्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय पहिचान प्रदान गर्न आवश्यक छ। मेक्सिकन नागरिक संग सम्बन्ध भएका मानिसहरूले उहाँको (जन्म प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र) पुष्टि कागजातहरू पेश गर्नुपर्छ।
के तपाईं आफ्नो कार्य गतिविधिहरु संग जोडिएको जो छ मेक्सिको अब, आमन्त्रित गरिन्छ भने हुनेछ पनि जो नाम समावेश निमन्त्रणा पत्र, पेस गर्न आवश्यक दर्ता नम्बर, कम्पनी को ठेगाना र तपाईं देशमा पूरा गर्नेछ भन्ने जानकारी को काम।
औँठाछापहरू र consular शुल्क
को consular अधिकारी दस्तावेज प्याकेज पढेपछि सबै आवेदकहरुलाई (उमेर बिना) औंलाहरु स्कैन। तपाईं त भिसा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो अमेरिकी डलर मा सेट गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद भुक्तानी तय दरमा rubles बनेको छ। मेक्सिको गर्न पर्यटक भिसा तपाईं खर्च हुनेछ $ 36, अतिथि वा व्यवसाय - 134 डलर गर्न, र काम - 195 डलर।
टारागोना: ठाँउहरु। टारागोना के हेर्न
इस्पात थुक्नु (क्रिमीआ)। काला सागर भ्रमणमा
Tuimsky विफलता (Khakassia): पर्यटक साइट technogenic मूल
किन सुन्निएको लेबिया: सम्भव कारण
होटल Xanadu रिजर्ट5* (टर्की, बेले): पर्यटकहरु को विवरण र समीक्षा
प्लड्स: प्रवृति प्रवृत्ति
बच्चालाई गरेको सेक्स थाहा राष्ट्रिय संकेत लागि जाँदा: समीक्षा
"Albatros महल Resort5*" Hurghada: वर्णन, कैरेक्टराइजेशन र समीक्षा
केक "युद्ध" - को fatherland को डिफेन्डर लागि ठूलो आश्चर्य
टाटा टक्सन। समीक्षा महत्त्वपूर्ण छन्